मस्कोको बीचमा निःशुल्क पार्क गर्न कहाँ? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
मस्कोको बीचमा निःशुल्क पार्क गर्न कहाँ?
मस्कोमा, विशेष गरी केन्द्रमा, नि: शुल्क पार्कि find पाउन गाह्रो छ। अधिकतर पार्कि paid भुक्तान हुन्छ। मस्कोमा सप्ताहन्त र छुट्टिहरूमा पार्कि the सडकको छेउमा नि: शुल्क हुन्छ। यसबाहेक, आइतवार मात्र एक दिन छुट मानिन्छ। त्यस्ता पार्किंग स्थलहरूमा स signs्केतहरू पनि छन् कि आइतवार को भुक्तानी लिइएको छैन। तपाईं यार्डहरूमा खोजी गर्न सक्नुहुनेछ, तर स्थानीय बासिन्दाहरूले प्रवेशद्वारमा बढ्दो अवरोधहरू स्थापना गरिरहेका छन, ताकि कोही पनि नि: शुल्क पार्कि ofको खोजीमा रोक्न नपाओस् र कसैको ठाउँ लिनेछ। ठीक छ, र, एक विकल्पको रूपमा, तपाईंले उद्धरण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ; स्थायी रेसिडेन्टकोट;, यदि तपाईं शहरको निवासी हुनुहुन्छ भने। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, तपाईंको पार्किंग कहिँ पनि निःशुल्क हुनेछ।
गाह्रो, तर सम्भव छ। तपाईं हाम्रो देशको राजधानीको बीचमा स्कूलहरू र अस्पतालहरू नजिक निःशुल्क पार्क गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले पनि ट्र्याक गर्न सक्षम हुँदैन कि तपाईं कर्मचारी हुनुहुन्छ वा यी संस्थानहरूको आगन्तुक हो वा हैन। तर यो याद राख्नु उचित छ कि यी संस्थाहरूमा पार्कि space स्थानको व्यवसाय पूर्ण रूपमा तपाईंको विवेकमा निर्भर गर्दछ।
मलाई कोटेलिनेक्स्काया तटबन्धमा उच्च वृद्धि भएको भवनको नजिक ठाँउ थाहा छ। यो वास्तवमा बुलेभार्ड रिंगको बोर्डर हो।
बुलेभार्ड रिंग भित्र भित्र व्यावहारिक कहीं छैन नि: शुल्क पार्क गर्न। सशुल्क पार्किंगको एक अंश विकलांग व्यक्तिहरूको लागि निःशुल्क पार्कि forको लागि छुट्याइएको छ। १ मई २०१ 1 बाट तपाईंलाई साताको अन्त्य र छुट्टीहरूमा केन्द्रमा निःशुल्क पार्क गर्न अनुमति दिइनेछ।
म ट्रुभनाया स्क्वायरको बिचमा बोउलेभर्ड रिंगमा निःशुल्क पार्क गर्न सक्थें (त्यहाँ पर्याप्त ठाउँ छ)। मलाई लाग्छ अब सशुल्क पार्किंग छ।
गार्डन रिंगको पछाडि पार्कि finding फेला पार्न कुनै समस्या छैन।
सशुल्क पार्किंग नियमहरू अदालत क्षेत्रहरूमा लागू हुँदैन।
भुक्तान गरिएको पार्किंग क्षेत्र र स्थान सोही अनुसार सुसज्जित हुनुपर्दछ, जसको मतलब संकेतहरू उपस्थित हुनुपर्दछ। यदि तिनीहरू भुक्तानी गरिएको पार्कि territoryको क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् भने तिनीहरू मोटर चालकहरूद्वारा निर्देशित छन्। केवल यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि अब भुक्तान गरिएको पार्कि zone जोन बगैंचा बँगै बाहिर छ, र खाली पिलर मुनि कारहरू राखेर फर्केर तपाईंले उद्धरण पाउन सक्नुहुन्छ; सशुल्क पार्किंग;
हामीसँग पार्कि the संकेत कोट; otquot;, र, यदि यो भुक्तानी गरिएको छ भने, सर्कल चिन्हको सिक्काको मुनि चिन्ह लगाईएको हुन्छ। कहिलेकाँही त्यहाँ शिलालेख उद्धरणको साथ एक बिलबोर्ड हुन्छ; तपाईं भुक्तान गरिएको पार्कि zone जोनकोटमा प्रवेश गर्नुहुन्छ; यदि त्यहाँ एक पनि छैन अर्को हो भने तपाईले पार्कि forको लागि भुक्तान गर्नु पर्दैन, यो सित्तैं हो। कहिलेकाँही भुक्तान गरिएको पार्किंगमा सम्बन्धित मार्किंग लागू हुन्छ, यदि तपाईलाई भुक्तानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा शंका छ भने यो चिन्ताजनक हुनुपर्दछ। यो यदि ड्राइभरले अचानक सम्बन्धित स see्केत देखेन भने, तर एक सूचना बोर्ड र चिन्हहरू देखे।
यदि तपाइँले पार्कि lot भेट्टाउनुभयो र त्यहाँ कुनै स are्केतहरू छैनन् जुन स paid्केत गर्दछ कि यो भुक्तान गरिएको छ, र त्यहाँ भुक्तानीको लागि कुनै टर्मिनलहरू छैनन्, तब पार्कि free नि: शुल्क छ। Pm बेलुका र सम्पूर्ण रात पछि, केन्द्रमा पार्कि parking नि: शुल्क छ ...
मस्कोको बीचमा निःशुल्क पार्कि hospitals अस्पताल र मन्दिरको नजिक फेला पार्न सकिन्छ। तपाईं केन्द्रमा हालको पार्कि see देख्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईंलाई भुक्तान गर्नुपर्दैन, आईट्यून्स पार्क अनुप्रयोगमा अनुप्रयोग प्रयोग गरेर। यदि तपाईंसँग पूंजी दर्ता छ वा तपाईं यहाँ ईस्टेट छ भने, तब तपाईं MFC मा एक निवासी पार्किंग अनुमति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई मस्कोको मध्य भागमा सशुल्क पार्किंग स्थलहरूको पार्कमा नि: शुल्क पार्क गर्ने अवसर दिनेछ। यो सत्य हो, तपाईंले प्रति वर्ष 3000 रूबल तिर्नु पर्छ। त्यस्तो अनुमतिको लागि नि: शुल्क पार्किंग घण्टा pm देखि am बिहान। यो पनि आइतवार र सार्वजनिक छुट्टी मास्को मा केन्द्र मा पार्किंग सित्तैमा हुन्छ।
वास्तवमा, मस्कोको मध्य भागमा नि: शुल्क पार्कि now अब केवल यार्डहरूमा मात्र सम्भव छ, किनकि तिनीहरू स्थानीय बासिन्दाहरूलाई वा त्यहाँ स्थित संस्थाका कर्मचारीहरूको लागि प्रदान गरिएको छ। अवश्य त्यहाँ पर्याप्त ठाउँ छैन, तर दिन को समयमा, उदाहरणका लागि, जब सबै काम र कामको लागि जान्छन्, एक आवासीय भवनको चोकमा ठाउँ पाउन सम्भव छ। र काम गर्ने दिनको अन्त्य पछि, यसको विपरित, केहि संस्था वा संस्थामा।
तपाईं असंख्य यार्डहरूमा पार्क गर्न सक्नुहुनेछ, जुन अवरोधहरूले बन्द गर्दछ, तर दिनमा उनीहरूमध्ये धेरै नि: शुल्क हुन्छन्। समस्याको समाधान छ - अवरोधहरू खोल्नको लागि एक सार्वभौमिक रिमोट कन्ट्रोल - percent० प्रतिशत खुल्छ (व्यक्तिगत रूपमा जाँच गरिएको) यो बेच्ने साइट साइटहरू अवरोधहरू छन्
21 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,417 प्रश्नहरू।